Ururka Suuqgeynta Mareykanka (AMA) qeexaa summad sida magaca, erayga, naqshada, astaanta, ama astaamo kale oo tilmaamaya hal iibiyaha wanaagiisa ama adeegiisa oo ka duwan kuwa iibiyaasha kale..
Way adag tahay in la helo su'aalo wax kastoo ka fudud: Yaad tahay? Maxay shirkaddaadu u jirtaa? Maxaad kaga duwan tahay tartanka? Haddana, kuwani waa qaar ka mid ah su'aalaha ugu adag ee ganacsigu ka jawaabi karo. Sabab wanaagsan, sidoo kale. Waxay ku dhuftaan wadnaha ganacsiga, qiimayaashiisa asaasiga ah iyo ujeeddada muhiimka ah. Iyo jiritaankeeda suuqa tartanka.
Tags: brandsumadda lagu qeexayqeexida astaantagodfreyfiidiyowga fiidiyowgawaa maxay summad